Mpanamboatra vokatra, mpamatsy - China Products Factory
200ml tavoahangy vita amin'ny fanafody Amber Glass, Pill Jar misy fonony Aluminium mainty
Ny siny hoditra sy rongony vita amin'ny vera 200ml dia ao anatin'ny vahaolana fanafody fonosana ataonay. Mora entina sy tantanana ny vera malama, raha ny vera vera kosa dia sivana voajanahary amin'ny taratra ultraviolet, mba hahafahanao mitahiry zavatra simika sy kapsily fatra-pika ao amin'ity fitoeran-tavoahangy ity. Ny sarona firakotra urea mainty misy 45mm dia manana fiarovana bebe kokoa. Ahosona manodidina ny vozon'ny tavoahangy ny lamba fisorohana mba hisorohana ny fahalavoana sy ny fivoahan'ny rano.
Tavoahangy syrup vera amber 100ml misy satroka tamper
Ny tavoahangin-tavoahangy vita amin'ny veromanitra 100ml sy ny satrony tamper-proof dia manana endrika tavoahangy fitsaboana nentim-paharazana ary tsara ho an'ny vahaolana sy syrup sy fanafody simika. Raha mila fonosana misy porofo manelingelina ianao mba hisorohana ny fidiran'ny ankizy dia tokony hoheverinao ny fampiasana azy.
Tavoahangy vera 1Mber Amber miaraka amina dispira solomaso vera ho an'ny santionany tavoahangy menaka kely ilaina amin'ny tavoahangy
Dimensions-hahavony 1,3 santimetatra, savaivony 0.6 santimetatra (nampidirina dropper).
Mora ny mampiseho santionany amin'ny mpanjifa, ilaina amin'ny famerenana entana izy ireo, noho izany dia mila mahazo izay ilainao eny am-pandehanana ianao.
Ny tavoahangy dia misy vovo-dronono natsofoka tao anaty siny tavoahangy ho an'ny famoahana mora sy tonga lafatra ary ny famoahana fanafody fanafody, fanafody, zava-maniry ary menaka manitra aromatherapy.
Tavoahangy fisotro misy tavoahangy vita amin'ny vera feno tavoahangy misy tavoahangy vita amin'ny aliminioma 200ml matte
Ny tavoahangin-tavoahangy 200ml dia tavoahangy nentim-paharazana ampiasaina amin'ny fanafody sy syrup kohaka, fa ankehitriny dia matetika kokoa ampiasaina amin'ny whisky sy divay hafa ary toaka, ranomanitra sy menaka. Ny tavoahangin-tavoahangy dia vita amin'ny vera tsara kalitao, ary ny drafitra dia manome anao sehatra fisaka maro azo ampiasaina amin'ny fanoratana tavoahangy tsotra. Manome sarony aluminium ho an'ireo tavoahangy ihany koa izahay.
Tavoahangy misy divay vita amin'ny divay 750mL
Tavoahangy maintso maintso 750ml Fuchsia / Bordeaux fampiasa divay antitra maintso no safidy mahazatra indrindra amin'ny karazany Bordeaux toy ny Bordeaux Cabernet Sauvignon sy Cab Franc.
Fomba haingana sy mety amin'ny tavoahangy labiera. Ireto tavoahangy flip-top 16,9 oz ireto dia fomba haingana sy mora amin'ny tavoahangy labiera nefa tsy mijanona! Ny mpanao birao dia toy ny fifehezana ny portability sy ny fizarana omen'ireto tavoahangy ireto. Mora ny manadio sy mailaka ary mora ampiasaina izy ireo. Tavoahangy 500 mL (16,9 fl oz) misy amboara flip plastika / seramika.
Manome fonosana manokana izahay!
330ml tavoahangy labiera amber lava hatoka lava
Ny tavoahangy labiera vera 330ml dia vita amin'ny vera amber tena avo lenta. Manana endrika mahazatra izy ireo ary manana tombony fanampiny amin'ny fampiasana vera amber. Tena mety amin'ny trano anaovana labiera azy ireo izy ireo, ary manao ny tavoahangy tonga lafatra ho fanomezana ho anao. Raha mitady tavoahangy ara-barotra ho an'ny tontolo fivarotana ianao, ny tavoahangy labiera vera amber dia hanome anao vahaolana lafo.
32oz 1000ml fitaratra mason fitahirizana tavoahangy misy fonony vy
Siny lehibe iray ity siny fitaratra 1000ml 32oz ity, mety be amin'ny fihinanan'ny fianakaviana. Ny siny fitaratra tsirairay dia vita amin'ny vera mangarahara matevina avo lenta ary nahatratra ny fenitra avo indrindra. Ary ny endriny dia mikendry ny hanatsara ny fampiasana ny vozony malalaka sy ny vatana lava kokoa. Ny satroka 86mm dia mifanaraka amin'ny siny ary manome anao tombony maromaro, ao anatin'izany ny plastisol mifono na PE liner. Ny sarom-bilany koa dia misy loko isan-karazany, anisan'izany ny mainty, volamena, volafotsy sns. Na inona na inona takiana aminao dia azonao antoka fa azo antoka, voaro ary aseho amin'ny fomba marina ny atiny.
16oz 500ml siny feno mason-tava misy vavony plastika miloko
Ny fonosana 16oz 500ml Clear Glass Food Jar & plastika vita amin'ny vera dia tavoara malalaka sy azo antoka amin'ny sakafo izay tsara indrindra hitazonana karazana pickles, saosy ary hitehirizana. Ny endrika boribory dia manome sehatra tsara hanampiana marika na marika marika vokatra hafa. Ity siny ity dia miaraka amin'ny fonony manify 86mm– tonga lafatra amin'ny fanolorana fitehirizana ny atin'ny siny fitahirizanao.
4oz 120ml Hexagonal Clear Glass Jar misy rakotra vy volamena
Ity siny fitaratra 4oz ity dia siny fitovoam-bolo antonony, izay tena mety amidy amin'ny tsena marobe. Ny endrika tsy manam-paharoa dia mora tazonina amin'ny tanana ary vita amin'ny vera mangarahara avo lenta. Izy io dia mety tsara amin'ny fampisehoana sy fitehirizana ny jelly an-trano, ny voankazo, ny chutney matevina ary ny tantely mamy.
1.5oz 45ml Mini Hexagonal Clear Glass Jar ho an'ny tantely, Jam, haingon-trano
Ity siny fitaratra hexagonaly 45ml misy sarony ity dia ao anatin'ny andian-tsarimihetsika hexagonal, raha te hanome vokatra amin'ny habe samihafa ianao dia tokony handinika izany. Ity tavoahangy vava malalaka 45 ml ity dia vita amin'ny vera mangarahara avo lenta, izay mety tsara amin'ny fampisehoana tsara sy ny fitehirizana ny jelly an-trano, ny voankazo, ny chunkney ary ny tantely mamy.
Mitsimoka Jar Kit Seed Sprouter Set dia ahitana vava malalaka Mason Jar, 304 Stainless Steel harato sarony, Neoprene Sleeve ary plastika mitete bakoly ho an'ny fanaovana voa tsimoka
Ity kit ity dia misy ny zavatra rehetra ilainao hanombohana. Izy io dia manana siny fitaratra mitaingina izay afaka manampy anao hamboly karazan-voa maro samihafa nefa tsy misy olana. Fantsona mitete. Tsy apetrakao amin'ny toerana maizina intsony ny siny. Manome tanany neoprene miaro hazavana isika izay afaka manahaka ny haizina, mba hahafahanao mifehy ny tontolo iainana izay apetraka ny siny amin'ny alàlan'ny fametrahana ny tanany fotsiny amin'ny tavoara. Manampy amin'ny fitsimohany, mampihena ny fotoana fitsimohany, mamoaka tsimok'aretina lava kokoa, ary afaka mamelona loko ny zavamaniry, amin'izay manampy voa sasany hitsimoka.
Tavoahangy paompy fitaratra, Tavoahangy fitaratra fitaratra misy paompy, Tavoahangy fitaratra miaraka amina famoahana paompy, Tavoahangy fitaratra misy paompy famaohana, Tavoahangy paompy fitaratra ho an'ny menaka tena ilaina, Tavoahangy paompy fitaratra ho an'ny shampoo,